६३ सह-सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित) « Naya Page
६३ सह-सचिवको सरुवा, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)
प्रकाशित मिति : २२ असार २०७७, सोमबार ०८:४२
काठमाडौं, २२ असार । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा सहसचिवहरुको सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले प्रशासन सेवाका ६३ जना वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई प्रदेश कार्यालयहरुमा खटाएको छ । कतिपयको काज सरुवा गरिएको छ भने कतिपयलाई कामकाजका लागि भनेर पठाइएको छ ।
वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई सकेसम्म काठमाडौं बाहिर पठाउने नीति मन्त्रालयले लिएको । सोही नीति अनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका ६३ जना सहसचिवहरुलाई बिभिन्न कार्यालयहरुमा खटाइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि वरिष्ठ सहसचिवहरुले पहुँचको भरमा काठमाडौं नछोड्ने र कनिष्ठहरुलाई मात्र काठमाडौं बाहिर सरुवा गरेर पठाउने गुनासो आउने गरेको थियो ।
यही गुनासाको बीच ६३ जना सहसचिवहरुमध्ये धेरैजसोलाई काठमाडौं बाहिर पठाइएको छ । मन्त्रीयस्तरमा यो निर्णय यही असार १९ गते नै भए पनि मन्त्रालयले आइतबार मात्रै सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शोभाकान्त पौडेललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कामकाजको लागि खटाइएको छ ।
गृह मन्त्रालयका सरोज गुरागाईलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका काशीराज दाहाललाई प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा, अख्तियारकै प्रदीप कुमार कोइरालालाई पर्यटन मन्त्रालयमा र अर्थ मन्त्रालयका भुपाल बराललाई प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाएइको छ ।